Posted by သက်ဝေ at 10:30 AM 31 comments:
ယနေ့ကြွလာ မိတ်သဟာ ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ…
ခရီးတိုလေးတခု သွားဖို့ နားရက်အနည်းငယ် ယူထားလို့ လူက အလိုလိုနေရင်း အပျော်ကြီး ပျော်နေပါတယ်…
ဘယ်သွားမှာလဲ ဆိုရင်တော့ တိမ်တိုက်တွေ၊ တောင်တန်းတွေ၊ ပင်လယ်ပြာပြာတွေနဲ့ နီးစပ်ခွင့်ရနိုင်မယ့် နေရာတခု ဆိုပါစို့….
နားရက်တွေထဲက ဒီနေ့ Day (1) အနေနဲ့ အိမ်ရှင်းပါတယ်… ပြီးတော့ ဈေးမသွားပဲ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ရှိသမျှတွေကို စုစည်းပြီး ဟင်းဖြစ်အောင် ကြံဖန် စီမံပါတယ်။ ပြောရရင် မိဘနှစ်ပါး ရန်ကုန်ပြန်သွားပြီးထဲက အိမ်မှာ ခေါက်ဆွဲပြုတ် တလှည့် ကြက်ဆီထမင်း တလှည့် အပြင်ထွက်စားတာ တလှည့်နဲ့ ဖြစ်သလို စီစဉ် စားသောက်နေရာကနေ ဒီနေ့ မနက်မှာ ဖဘက ဟင်းလျာတွေ ကြည့်၊ ဗစ်ရဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို ကြည့်၊ တီတီဆွိရဲ့ ရခိုင်မုန့်တီတွေ ကျောက်ကျောတွေ ကြည့်အပြီးမှာ လူက အလိုလိုနေရင်း ချက်ချင် ပြုတ်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်…။
ဒီလိုနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲ မွှေလိုက်တဲ့ အခါမှာ ပထမဆုံး ကြိတ်ထားပြီးသား ၀က်သားအကြေတွေ တွေ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ မေမေယူလာတဲ့ သေးသေးလှီးထားပြီးသား မျှစ်ချဉ်တချို့ကို တွေ့တော့ အိမ်မှာ အနံ့ နံချင်လည်း နံပါစေတော့လေ ဆိုပြီး ၀က်သားအကြေနဲ့ ခုနက မျှစ်ချဉ်လေးတွေကို ငရုတ်သီး စပ်စပ်နဲ့ ကြော်ပါတယ်…
ကျန်တဲ့ ၀က်သားအကြေတွေကို ကြက်သွန်ုဖြူ ဂျင်းနဲနဲ ကြက်ဥတလုံး Tempura မှုန့်တို့ ရောနယ်ပြီး ၀က်သားလုံး (ပြား) ကြော် ကြော်လိုက်ပါတယ်…။ ပုံထဲမှာ ၀က်သားလုံးကြော်တွေနားမှာ တွေ့ရတဲ့ စိမ်းစိမ်းတွေက ဆလတ်ရွက် တချို့ပါ။ ဓါတ်ပုံထဲမှာ လှအောင် တမင်သက်သက် လှီးထည့်ထားတာပါ...
အသီးအရွက် တခုခု ချက်ဖို့ စဉ်းစားတော့ ဘူးသီးတလုံး တွေ့ပါတယ်…။ ဒါနဲ့ ဘူးသီးကို ကလေး လူကြီးမရွေး သုံးဆောင်နိုင်ဖို့ အဖြူထည် အချိုချက်ကို အိမ်က ပို့ပေးထားတဲ့ ငါးခူမွှေနဲ့ ချက်ပါတယ်။ မျှစ်ချဉ်နံ့ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ မီးဖိုချောင်ကို စပါးလင်နံ့နဲ့ ရောနှောသွားစေခြင်း အလို့ငှာ ဘူးသီးဟင်းထဲကို စပါးလင် တချောင်း ထုထည့်လိုက်ပါတယ်…။
ဒီလိုလေး ဆိုတော့ ဟင်းစပ်တည့်တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်…။
မချက်ရင် အရှင်း ချက်ရင် ရပ်လို့မရတော့တဲ့ အန်တီသက်ဝေဟာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထောပတ်အသစ် တခဲရယ် အုန်းနို့ တထုပ်ရယ် စားပွဲပေါ်မှာ အမှည့်ခံထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးတဖီးရယ်ကို တွေ့လိုက်တဲ့အတွက် ခေါင်းထဲမှာ မီးသီးလေး တလုံး လက်ကနဲ လင်းသွားပါတယ်။ အုန်းနို့က အမှန်ဆို အုန်းနို့ကျောက်ကျော လုပ်စားချင်လို့ ၀ယ်ထားတာပါ… အဲဒီအတွက် ကျောက်ကျောအမှုန့်ထုပ်လေးတွေလည်း အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောက်ကျောထုပ်က အထားခံသေးတယ်… ငှက်ပျောသီးက အထားမခံဘုးလို့ တွေးပြီး ငှက်ပျောသီး ဆနွင်းမကင်း လုပ်ဖို့ ပြင်ပါတော့တယ်…
ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ... လုပ်ရတာလည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ်... အားလုံး ရောနယ်ပြီး ဗန်းကို ထောပတ်သုပ်ပြီး အာဗင်ထဲ ၁၅၀ ဒီကရီနဲ့ တနာရီ ထည့်လိုက်တာပါပဲ...။ ဒီတခါတော့ အိမ်မှာ အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ မွှေး ရွှေကြည်မှုန့် အနည်းငယ်လည်း ထည့်လိုက်ပါတယ်… ဘိန်းစေ့ကတော့ ထည့်ဖို့ မေ့သွားတယ်... ဒါပေမယ့်လည်း စားလို့ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်…
ဒီလောက်နဲ့တင် အရှိန်သတ်လို့ မရနိုင်သေးတဲ့အတွက် ကျန်နေတဲ့ ထောပတ် တ၀က်နဲ့ Short Bread လို့ ခေါ်တဲ့ နံကထိုင် ဆက်လုပ်ပါတယ်… အာဗင်သုံးတာ မီတာ အတော်တက်တတ်တာမို့ မျက်စောင်းထိုးနေတဲ့ သူ့ကို ရဲရဲဝံ့ဝံကြီး မသိချင်ယောင် ဆောင်ရင်း Short Bread အတွက် ဆက်လက်ပြင်ဆင်ပါတယ်… လုပ်နည်းကတော့ Youtube မှာကြည့်ပါတယ်… Evy ဆီကလည်း ကြည့်ပါတယ်… လှလှပပတွေ ပြင်ဖို့ ဆင်ဖို့ စိတ်မရှည်တတ်တဲ့၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်မရှိပဲ ပြီးစလွယ်လုပ်တတ်တဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Short Bread လေးတွေဟာ အတို အရှည် အထူ အပါး မညီကြပါဘူး… တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ… အမြင်မလှပေမယ့် အရသာကတော့ ထူးထူးခြားခြား ကောင်းမွန်ပါတယ်...
အားလုံး ချက်ပြုတ် ပြီးစီးတော့ ရေချိုး ထမင်းစား လုပ်ထားတဲ့ မုန့်တွေ ဆက်စား…. ပြီးတော့ Download ချစရာ မလိုပဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရတဲ့ Watch32 ကနေ မကြည့်စဖူး ရုပ်ရှင် တကား တိတိ ကို လဖက်တဗူး ဘေးချလို့ ပြီးဆုံးအောင် ကြည့်လိုက်ပါတယ်…။ ရုပ်ရှင်နာမည်က Last Night ပါ… ပေ့ါပေါ့ပါးပါး အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတခုပါပဲ…။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့ သစ္စာတရား နဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းအားကို လှလှပပလေး ပြသွားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ…။ ကြည့်ရတာ ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်…။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ ဒီပိုစ့်ကို ရေးပါတယ်…
ယနေ့ကြွလာ မိတ်သဟာ ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ… (အလဲ့)
Posted by သက်ဝေ at 7:20 PM 13 comments:
အမှန်ဆိုရလျှင် ညနေ သုံးနာရီဟူသော အချိန်သည် တဆိတ်တော့ ကိုးလိုး ကန့်လန့်နိုင်လှသော အချိန်တခုသာ…။ ညနေ သုံးနာရီသည် တခုခုကို ပြုလုပ်ရန် အနည်းငယ် နောက်ကျ နေပြီဟု တွေး၍ ရနိုင်သလို အနည်းငယ် စောနေသေးသည် ဟု တွေး၍ ရနိုင်သော အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ညနေ သုံးနာရီသည် ရှေ့တိုးရမလို နောက်ဆုတ်ရမလိုနှင့် မတင်မကျဖြစ်နေသော ခံစားမှုတခုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အချိန်ဟုလည်း ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်တခုအနေဖြင့် ကောက်ချက်ချ ကြည့်ချင်ပါသည်။
အလုပ်နားရက်များတွင် နေ့လည်စာ စားအပြီး အိပ်ရာပေါ်တွင် စာအုပ်တအုပ်နှင့် လှဲခွေနေရာမှ မျက်လုံးများ မှေးစင်းကာ အိပ်ချင်လာသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။ အလုပ်တက်ရသော နေ့ရက်တိုင်းတွင် အလွန်တရာ ပျင်းရိစွာဖြင့် အိပ်ငိုက်ချင်နေသောအချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးတခုတွင် ကြားဖြတ် အနားယူပြီး ကော်ဖီသောက်ရန် အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။ ကောင်မလေးတယောက်က ကောင်လေးတယောက်ကို ချစ်အဖြေပေးရန် သာယာလှပသော ပန်းခြံတခု (သို့မဟုတ်) တနေရာရာသို့ ချိန်းဆို ခေါ်ယူသောအချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။ မျက်မမြင် လူမည်း အဆိုတော် Stevie Wonders ၏ I just called to say I love you သီချင်း ရေဒီယိုမှာ လာလေ့ရှိသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။ အိမ်အနီးရှိ မူလတန်းကြို ကျောင်းတကျောင်းမှ ကလေးများ ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာရေးအတွက် နှစ်ယောက်တတွဲ လက်ချင်း ချိတ်ကာ လျှောက်သွားကြသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အိမ်ရှေ့မှ ဖြတ်သွားသော ကောင်မလေးတယောက် ၀တ်ဆင်ထားသော တီရှပ် နောက်ကျောမှာ ရေးဆွဲထားသော နာရီပုံတွင် ညွှန်ပြနေသော လက်တံသည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာနေခဲ့သော ရပ်ဝေးမှ သူငယ်ချင်းတယောက် ဖုန်းဆက်လာသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်နေပြီး သူနှင့် တွေ့ဆုံကာ စကားပြောရန် ချိန်းဆိုသော အချိန်မှာလည်း လာမည့် သောကြာနေ့ ညနေ သုံးနာရီပင် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အိမ်ပြန်ခရီးတခုတွင် လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်သို့ လေယာဉ်ပျံ ဘီးချသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သလို အိမ်ရှေ့မှ အနီရောင် စာတိုက်ပုံးထဲသို့ (မျှော်နေသော) စာများ ရောက်လာတတ်သော အချိန်မှာလည်း ညနေ သုံးနာရီ ပင်ဖြစ်သည်။ မွေးနေ့တွင် ချစ်သူ ခင်သူများဆီမှ လက်ဆောင်များ ပန်းစည်းများ လက်ခံရရှိသော အချိန်၊ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သော ကောင်းသတင်းများ၊ မိသားစုနှင့်ပတ်သက်သော ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းများ ကြားရသော အချိန်တွေသည်လည်း အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညနေ သုံးနာရီတွေမှာ ဖြစ်နေလေသည်။
ထိုမျှသာမက အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတယောက်၏ မိခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်ကြောင်း သတင်းကို သိရသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။ စီးနင်းလာသော အငှားကား လမ်းခုလတ်တွင် ဘီးပေါက်ကာ ရပ်တန့်သွားသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်နေသေးသည်။ သုံးလက်စ ကွန်ပျူတာလေး အမည်းရောင် စကရင်ကြီး ဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက် ပျက်စီးသွားသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။ ရေးလက်စ ဘောပင် မှင်ကုန်သွားသော အချိန်၊ စိတ်ပါလက်ပါ ဟင်းချက်သောနေ့က ဟင်းအိုး ရေခန်းကာ တူးကပ်သွားသော အချိန်၊ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရေပိုက် ပိတ်ပြီး ရေတွေ လျှံကျလာသောအချိန်… စသည့် သေးသေးမွှားမွှား ဖြစ်ရပ်များကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အချိန်သည်လည်း ပြောရရင် ညနေ သုံးနာရီသာ…။
ဘ၀မှာ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းများ ရောနှောနေသော ညနေ သုံးနာရီပေါင်း များစွာကို လက်ခံ ကြုံဆုံခဲ့ရဖူးသည်။ ထို ညနေ သုံးနာရီများကို ချစ်သည်လည်း မဟုတ်… မုန်းသည်လည်း မဟုတ်… သို့သော်လည်း စိတ်ထဲတွင် မှတ်မှတ်ရရ သတိတော့ ထားဖြစ်နေသည်မှာ အသေအချာ…။ နေ့ရက်တွေတိုင်းမှာ ညနေ သုံးနာရီနားနီးလာလျှင် လက်မှာ ပတ်ထားသော နာရီကို အလိုလိုနေရင်း ငုံ့ကြည့်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး မော်နီတာ ညာဖက် အပေါ်ထောင့်မှ ဂဏန်းလေးများဖြင့် ပြသော နာရီကို ကြည့်မိတတ်သည်။ မည်မျှပင် အလုပ်များနေစေကာမူ ညနေ သုံးနာရီတ၀ိုက်တွင် စိတ်က အလိုလိုနေရင်း နာရီကို သတိထားကာ ကြည့်မိနေတတ်သည်။ စကားဝိုင်းတခုတွင် ထိုအကြောင်းကို စကားစပ်၍ ပြောပြဖြစ်သောအခါ ညနေ သုံးနာရီများကို စွဲလမ်းသော ပြဿနာ… ဟု မိတ်ဆွေတယောက်က ကောက်ချက်ချဖူးသည်။ သူ ပြောတာ ဟုတ်ပါလိမ့်မည်…။
ညနေ သုံးနာရီကို သည်မျှ စွဲလမ်းသူ တယောက်ကို မျှော်လင့်မထားသော အဖြစ်အပျက်တခုနှင့် တိုက်ဆိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့စေသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သလို ထိုအဖြစ်အပျက်၏ နောက်ဆက်တွဲ ဟု ဆိုနိုင်သော အဖြေ ရလာဒ်တခုအတွက် စိတ်နှလုံး ပင်ပန်း မောဟိုက်စွာ စောင့်မျှော်ရန် ချိန်းဆိုခံလိုက်ရသော အချိန်သည်လည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညနေ သုံးနာရီသာ ဖြစ်လို့ နေခဲ့လေသည်။
ဘုရားရေ… အခု ညနေ သုံးနာရီထိုးရန် မိနစ်အနည်းငယ်သာ လိုတော့သည်…။
လက်ထဲမှ လက်ပတ်နာရီ၊ နံရံပေါ်မှ တိုင်ကပ်နာရီ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းမှာ ပေါ်နေသော နာရီ… ထိုနာရီများ အားလုံးသည် သုံးနာရီထိုးရန် မိနစ်အနည်းငယ်သာ လိုတော့ကြောင်း တညီတညွတ်တည်း ပြသနေကြသည်။ မကြာခင်မှာ တခုခုကို သေသေချာချာ သိရတော့မည်…။ အဖြူ အမည်း သဲကွဲတော့မည်…။ စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် လက်ဖ၀ါး အချင်းချင်း မသိမသာ ပွတ်တိုက် နေမိသည်။ လက်ချောင်းများ၏ အေးစက်သော အထိအတွေ့ကို လျှစ်လှူရှုကာ မသိလိုက် မသိဖာသာ ထားချင်သော်လည်း မရ…။ လေအေးပေးစက်ကြောင့် လက်ဖျားတွေ လိုသည်ထက် ပိုအေးနေသည်ဟု တဖက်သတ် ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်သည်။
အခန်းကျယ်ကြီး တခုထဲမှာ ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက် လျှောက်နေကြသူများ၊ မိုးတိုးမတ်တပ် ရပ်နေကြသူများ၊ ကောင်တာတွင် ငွေရှင်းရန် စောင့်နေကြသူများ၊ ကော်ဖီဖျော်စက်မှာ ကော်ဖီယူသောက်ရန် တန်းစီနေသူများ၊ စကားစမြည် ပြောဆိုနေကြသူများ၊ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေကြသူများ များစွာ ရှိနေသည်။ ထိုလူများ အကြားမှာ မိမိနာမည်ကို ခေါ်လျှင် မကြားလိုက်မည်စိုးသောကြောင့် နားကို အတတ်နိုင်ဆုံး စွင့်ရင်း အသံတွေတိုင်းကို အာရုံစိုက်နေမိသည်။ ကိုယ့်နာမည်ခေါ်လျှင် ချက်ချင်း ထသွားနိုင်ရန်လည်း ခါးကို မတ်ကာ ခန္ဒာကိုယ်ကို အသင့် အနေအထားဖြင့် ပြင်ထိုင်လိုက်မိသည်။ မတည်ငြိမ်သော စိတ်အတွေးတို့ဖြင့် နာရီကို နောက်တခါ ထပ်ကြည့်လိုက်သောအခါ နာရီလက်တံများသည် သုံးနာရီထိုးရန် နှစ်မိနစ်သာ လိုတော့သည်ဟု ညွှန်ပြနေကြသည်။ သက်ပြင်းတချက်ကို ဖြေးညှင်းစွာ ချနေချိန်မှာ နာမည်ခေါ်သံကို ပီပီသသ ကြားလိုက်ရသည်…။ လာပါပြီ… လာပါပြီ… ဟု ပါးစပ်က ရေရွတ်ရင်း တချိန်တည်းမှာ လူကလည်း မိမိသွားရမည့် အခန်းဝသို့ သွက်လက်စွာ ရောက်သွားခဲ့သည်။
အခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်ကာ ၀င်သွားလိုက်ပြီး သူတို့ ညွှန်ပြရာ စားပွဲဘေးမှ ထိုင်ခုံတွင် အသာအယာ ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။ စားပွဲတဖက်မှာ ထိုင်နေသော ရုပ်ရည် သန့်ပြန့်ကာ အထင်ကြီး လေးစားချင်စရာ၊ အားကိုးချင်စရာ တည်ငြိမ် အေးချမ်းသော အသွင်အပြင်ရှိသူ ဆရာဝန်ကြီးက နှစ်လိုဖွယ် အပြုံးနှင့် အတူ နှုတ်ဆက်လေသည်။ နှစ်သိမ့်ပြုံးလေလား… အားပေးပြုံးလေလား… မ၀ံ့မရဲတွေးမိစဉ်မှာ အာရုံတွေ မှောင်မိုက် ထွေပြားစွာ အေးခဲနေခဲ့သည်။ မြန်မြန်ပြောလိုက်ပါတော့လား…. အဖြေက ဘာလဲဟင်… ဟု သိချင်ဆန္ဒ ပြင်းပြစွာဖြင့် တဲ့တိုးကြီး မေးချလိုက်ချင်သော်လည်း လည်ချောင်းဝတွင် တစုံတခုက လာရောက် ပိတ်ဆို့နေသလို… အသံက အပြင်သို့ ထွက်မလာ…။
ထိုစဉ် ပရင်တာသံ တဂျစ်ဂျစ်ကို ကြားလိုက်ရသည်။ ဟော… ဒါဆို သိရတော့မည်… တခုခုကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ သိရတော့မည်…။ စားပွဲအောက်မှ အေးစက်နေသော လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို အချင်းချင်း တင်းကြပ်စွာ ဆုတ်ကိုင်ထားမိသည်။ အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ထားသလို အဆိုးဆုံးအတွက်လည်း တွက်ဆ ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အခုအချိန်မှာတော့ ကြိုးစားပမ်းစား တင်းထားရသော အားအင်များ အကုန် ပျောက်ဆုံးနေကြသည်။ ရင်ထဲမှာ တထိတ်ထိတ် တုန်ခါလျှက် ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကို ကိုယ် ပြန်ကြားမိနေသလို…။ ထိုအချိန်မှာပဲ မျက်စိရှေ့မှောက်ကို စာရွက်ဖြူ တစ ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်သည်…။
ေ၀၀ါးသော မျက်လုံးအစုံက ရုတ်တရက် ဘာကိုမှ မမြင်မတွေ့နိုင် ဖြစ်နေသေးသည်။ မျက်တောင်များကို အနည်းငယ် ပုတ်ခတ် ပုတ်ခတ် လုပ်ရင်း အမြင်အာရုံကို ကြည်လင်စေလိုက်သည်။ မျက်စိအောက်မှ စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးထားသော စာလုံးများထဲမှ အရေးကြီးသော စာလုံးတလုံးကိုသာ ကျီးကန်းတောင်းမှောက် ရှာဖွေနေမိသည်…။
ထိုင်နေရာမှ ထမခုန်မိအောင် သတိကြီးစွာ ထားလိုက်ရသည်…။ သို့သော် နှုတ်ဖျားမှ အလိုအလျောက် ထွက်ကျသွားသော ၀မ်းသာ အံ့သြသော အာမေဋိတ်သံ ခပ်ကျယ်ကျယ်ကိုမူ မည်သို့မျှ မထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တော့ချေ။ သူ့ကို ကြည့်ရင်း ကြည်လင်စွာ ပြုံးနေသော ဆရာဝန်ကြီးနှင့် ဘေးနားမှ သူနာပြုဆရာမလေး နှစ်ယောက်ကို တယောက်တလှည့်စီ လိုက်ပြုံးပြရင်း ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် ထူးထူးခြားခြား ၀မ်းသာနေခဲ့တာ ဖြစ်သည်။
ရက်ပေါင်း အတန်ကြာ ကြောင့်ကြ စိုးထိတ်ခဲ့ရသော ပူပန်ခဲ့ရသော သောကများစွာ၊ တွေးလိုက်မိသော အချိန်တွေတိုင်းမှာ အရှင်လတ်လတ် အေးခဲ သေဆုံးသွားခဲ့ရသော အကြောက်တရားများစွာ၊ သိလိုသည်များကို ရှာဖွေဖတ်ရှုရင်း စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် တုန်ခါနေသော လက်ထဲမှ လွတ်ကျခဲ့ရသော စာအုပ်ပေါင်း များစွာ၊ လူအများနှင့် မတွေ့မဆုံချင်ပဲ တကိုယ်တည်း အခန်းအောင်းနေခဲ့သော နေ့ပေါင်းများစွာ၊ စားမ၀င်သော နေ့များနှင့် အိပ်မပျော်သော ညပေါင်းများစွာ၊ တရိပ်ရိပ် ကျဆင်းနေသော ကိုယ်အလေးချိန်၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးတိုးနှုန်းများနှင့် သွေးခုန်နှုန်းများ၊ သေချာသလောက် ရှိနေပြီဟု ယူဆပြီး တိတ်တိတ်ကလေး ငိုကြွေးခဲ့ရသော အချိန်များ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်၍ မရ… ဆိုးလှသော ကံကြမ္မာကိုသာ အဖန်တလဲလဲ ပုံချရင်း မောပန်းနွမ်းနယ်ခဲ့ရသော အချိန်များ၊ ပြုခဲ့သော ကုသိုလ် ကောင်းမှုများကို လက်ချိုးရေတွက်ရင်း ဘုရားကိုသာ အာရုံပြုနေခဲ့ရသော အချိန်များ...
အို… အခုအခါမှာတော့ ထိုအရာတွေအားလုံးသည် စာရွက်ဖြူဖြူပေါ်မှ စာလုံးလေးတလုံးအောက်တွင် အငွေ့ပျံကာ ကွယ်ပျောက်သွားကြပြီ ဖြစ်သည်။
ဖေါ်မပြတတ်အောင် နက်ရှိုင်း သိပ်သည်းလှသော အပျော်များ အတွေးများဖြင့် ငြိမ်သက်နစ်မျောသွားသည်မှာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားသည် မသိ…။ ထပ်တူ ၀မ်းသာသော၊ နားလည် စာနာသော အပြုံးများဖြင့် ၀ိုင်းကြည့်နေကြသူများကို တွေ့လိုက်ရတော့မှ လက်ရှိအခြေအနေကို ပြန်လည် သတိရသွားတာဖြစ်သည်။ အပြုံးချိုချိုဖြင့် သူနာပြုဆရာမလေးက ရှေ့မှာ ချထားသော စာရွက်ဖြူလေးကို လေးခေါက် ခေါက်ကာ စာအိပ်ဖြင့် ထည့်ပေးသည်။ ထိုစာအိပ်လေးကို တယုတယ လှမ်းယူလိုက်ရင်း သူတို့အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုရင်း ၀မ်းသာအပြုံးဖြင့် နှုတ်ဆက်ကာ ထိုအခန်းထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်။
တိုက်ဆိုင်မှု ဟု ဆိုရမည်လား… မတော်တဆမှု ဟု ဆိုရမည်လား…
ကူးစက်ဆေးရုံတခုတွင် ၀န်ထမ်းတဦး၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဝေဒနာရှင်တဦး၏ လက်ဖျံကြောအတွင်းမှ ထုတ်ယူလိုက်သော သွေးစက်လက်နှင့် ဆေးထိုးအပ်တချောင်း မတော်တဆ လွတ်ကျ လွင့်စင်ပြီး ဘေးနားမှာ ဖြတ်လျှောက်လာသော ကိုယ့်ခြေခုံပေါ်သို့ တည့်တည့်မတ်မတ် စိုက်ဝင် စူးနစ် သွားခဲ့သော အချိန်သည် နွေရာသီတခု၏ ပူစပ်ပူလောင် ညနေခင်း သုံးနာရီ အချိန်မှာ ဖြစ်သည်။ စိုးရိမ် ထိတ်လန့်မှု၊ ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်မှု၊ မရေရာ မသေချာမှုတို့ဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်နေရသော ရက်ပေါင်းများစွာကို ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက် အဖြေမှန်ကို စစ်ဆေးပြီး အစစ အရာရာ သန့်စင် ကင်းရှင်းကြောင်း စာတမ်းပါ စာရွက်ဖြူလေးတရွက်ကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့သော အချိန်သည်လည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညနေ သုံးနာရီ တိတိမှာပင် ဖြစ်နေလေတော့သည်။
အမှန်ဆိုရလျှင် ညနေ သုံးနာရီဟူသော အချိန်သည် တဆိတ်တော့ ကိုးလိုး ကန့်လန့်နိုင်လှသော အချိန်တခုသာ… သို့သော် ညနေ သုံးနာရီတွေတိုင်းမှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များကြောင့် ထို ညနေ သုံးနာရီတွေကို အရင်ကထက် ပို၍ စွဲစွဲလမ်းလမ်း သတိပြုမိနေဦးမည်မှာ အသေအချာပင်…
နှစ်နှစ်ပြည့် မျက်ရှု အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းအတွက် ရေးဖြစ်တဲ့ အက်ဆေးလေးပါ
ဒီနေရာ မှာလည်း ဖတ်လို့ရပါတယ်…
၂၀၁၃ ဧပြီလ - Look Magazine တွင် ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်သည်။
Posted by သက်ဝေ at 3:00 PM 12 comments:
Labels: E Book, Printed, အက်ဆေး
မနေ့က ညကိုးနာရီခွဲ သတင်းကြေငြာချိန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်တမဲ့ နားထဲဝင်လာတဲ့ သတင်းကြေငြာသံတခုကြောင့် တီဗီကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိပါတယ်…။ တမိနစ်လောက် ရှိတဲ့ သတင်းကြေငြာချက်ကို နားထောင်အပြီးမှာ စိတ်ထဲ ၀မ်းသာ ကြည်နူးသလိုလို၊ ၀မ်းနည်းမိသလိုလို ဝေခွဲမရတဲ့ ခံစားမှုတခုကြောင့် အဲဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာမျက်နှာတချို့ကို လိုက်ရှာပြီး ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်…။ အခု အဲဒီသတင်းလေးကို ကြည်နူးစရာ ဇာတ်လမ်းလေးတခုအနေနဲ့ “အသဲ အသက်နဲ့ ထပ်တူ” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်…။ ဇာတ်လမ်းလေးက ဒီလိုပါ…
Su Dan ဟာ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီး ဘေဂျင်းမြို့မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ Tian ဆိုသူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Company တခုကို တည်ထောင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခဲ့ပါတယ်…။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံမှာ ခြောက်နှစ်အရွယ် သမီးလေးတယောက် ရှိပါတယ်…။ သို့သော် Su Dan တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ သူတို့ Company ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြီးအကျယ် စကားများကြရာက စိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့ ၂၀၁၂ ဂျူလိုင်လမှာ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြပါတယ်…။
အဲဒီလို ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီး နှစ်လအကြာမှာ Tian ဟာ အသဲကင်ဆာ (Liver Cirrhosis) ဝေဒနာ ခံစားနေရပြီလို့ သိလိုက်ရပါတယ်…။ ဒီရောဂါအတွက် အသဲအစားထိုးပြီး ကုသဖို့ အသဲ အလှူရှင်တယောက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါပြီ…။ သို့သော် Tian အရှေ့မှာ အဲဒီလို အသဲအစားထိုး ကုသဖို့ အသဲအလှူရှင်ကို တန်းစီပြီး စောင့်နေကြတဲ့ လူနာ ဆယ်ယောက် ရှိနေပါတယ်…။
အဲဒီသတင်းကို ကြားရတဲ့ Su Dan ဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူ Tian ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် သူမရဲ့ အသဲ တစိတ်တပိုင်းကို ခွဲဝေမျှပေးဖို့ ဆေးရုံက Ethics Review Committee ကို ခွင့်တောင်းပါတယ်…။ ကံကောင်းချင်တော့ သူမရဲ့ သွေးအုပ်စု၊ Tissue Type အစရှိတာတွေကလည်း လူနာဖြစ်သူ Tian ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ထပ်တူ ကိုက်ညီနေပါတယ်…။
ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိတာက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေ စည်းကမ်း စည်းမျဉ်းအရ အခုလို ကိုယ်ခန္ဒာ အစားထိုး ကုသတဲ့နေရာမှာ အသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ အလှူရှင်ဟာ လူနာရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်း (သို့မဟုတ်) ဇနီး ခင်ပွန်း တော်စပ်သူ တယောက်ယောက် ဖြစ်ရပါမယ်…။ အဲဒါကြောင့် Su Dan ဟာ သူ ချစ်တဲ့ သူ့ ခင်ပွန်းရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် Tian နဲ့ ပြန်လည် လက်ခံပြီး လက်ထပ် ထိမ်းမြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း Ethics Review Committee အဖွဲ့ဝင်များက Su Dan ရဲ့ တောင်းဆိုမှု နောက်ကွယ်မှာ ငွေကြေးနဲ့ ဆက်စပ် ပတ်သက်မှု တစုံတရာ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ယူဆတာကြောင့် Su Dan ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ အဲဒီ အသဲအစားထိုးကုသဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးက Su Dan ဟာ သူ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို တကယ် စစ်စစ်မှန်မှန် ချစ်မြတ်နိုးလို့ အခုလို သူ့အသဲကို အစားထိုးစေပြီး Tian အသက်ကို ကယ်တင်လိုတယ်ဆိုတာ နားလည်စွာနဲ့ လက်ခံတဲ့အတွက် Su Dan ကို ဒုတိယ အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါတယ်…။ အဲဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဗဟူးနေ့က Su Dan ရဲ့ အသဲ တချို့ တ၀က်ကို Tian ဆီကို အစားထိုးပြီးတော့ ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၅ နာရီကြာမြင့်အပြီးမှာ နှစ်ယောက်စလုံးကို အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…။
အခုလို ခွဲစိတ်ကုသမှုအပြီးမှာ Tian ဟာ ဆေးရုံမှာ တပတ်ခန့် အနားယူ နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်မှာ သောက်ဆေးတချို့ကို ပုံမှန် သောက်နေရမှာကလွဲလို့ သာမန်လူကောင်း တယောက်လိုပဲ ကျန်းမာတဲ့သူ ဖြစ်သွားပါပြီ။ Su Dan ကလည်း ခွဲစိတ်ပြီး သုံးရက်အကြာမှာ ICU လို့ ခေါ်တဲ့ Intensive Care Unit ထဲမှာ ပုံမှန် လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်ပါပြီ။ သူ့ဆီက ဖြတ်တောက်ပေးလိုက်လို့ ရော့ပါးသွားတဲ့ အသဲဟာ နောက် ခြောက်လအတွင်းမှာ ပုံမှန်အရွယ်အစားကို ပြန်လည် ပြည့်ဝလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကို သိကြတဲ့ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်က ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆေးရုံအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆရာဝန်တွေ သူနာပြု ဆရာမတွေ အားလုံးက Su Dan ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်နိုင်မှုတို့ကို တသသနဲ့ ပြောမဆုံး ချီးကျူးမဆုံး ဖြစ်နေကြပါတယ်။
အဲဒီဇာတ်လမ်းလေးကို အခုလို ဝေမျှအပြီးမှာ ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ တွေးမိတာ နှစ်ခု ရှိပါတယ်…။
ပထမတခုက ကိုယ်တိုင် ထူထောင်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်တခုကို တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်ဆိုးရုံ ဒေါသဖြစ်ရုံနဲ့ လွယ်လင့်တကူ ပြီးတော့ အလျင်စလို စိတ်လိုက်မာန်ပါ ကွာရှင်း ပြတ်စဲတာမျိုး မလုပ်ကြပဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တယောက်ကို တယောက် ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ နားလည်မှုရှိရှိ ညှိနှိုင်းယူကြရင် ကောင်းမှာပဲ လို့ တွေးမိပါတယ်။ လောလောဆယ်ကို ကျွန်မ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲဒီလို အလျင်စလို ကွဲကြ ကွာကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေနဲ့ ထစ်ကနဲရှိ ကွဲမယ် ကွာမယ် တကဲကဲဖြစ်နေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေ တော်တော်များများ ရှိနေလို့ပါ။
နောက်တခုကတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ရှိကြတဲ့ မိခင်စိတ် ရောယှက်နေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာအကြောင်းပါ။ Su Dan ဟာ သူ့ ခင်ပွန်း Tian ကို တော်ရုံတန်ရုံ မေတ္တာစိတ်မျိုးနဲ့ အခုလို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ တကယ်ကို လေးနက်တဲ့ မေတ္တာစိတ်နဲ့ ချစ်ခင် စာနာတဲ့စိတ်မျိုးရှိနေလို့သာ အခုလို ဆုံးဖြတ်နိုင်တာပါ။ ပြောရရင် ကျွန်မဟာ ပြင်းထန်တဲ့ Feminist တယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Su Dan နေရာမှာ Tian သာ ဆို သူနဲ့ ကွာရှင်း ပြတ်စဲပြီးသား ဇနီးဟောင်းတယောက်ကို ခင်ပွန်းဟောင်းတယောက် အနေနဲ့ အခုလို မေတ္တာစိတ် အပြည့်ထားပြီး စွန့်စွန့်စားစား အသက်ကယ်နိုင်ပါ့မလား လို့ တွေးနေမိတာပါပဲ…။
မှတ်ချက် - ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလ - Look Magazine တွင် ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်သည်။
Reference က ဒီနေရာ မှာပါ
Posted by သက်ဝေ at 5:20 AM 22 comments:
Labels: Printed, Review, Sharing, ဆောင်းပါး
ခိုင်စိုးလင်း စီစဉ်တဲ့ သရဲမှတ်တမ်း (Ghost Record) E Book ဒီနေ့ ထွက်ပါပြီ…။
ပါဝင်ရေးသားကြသူများကတော့ ကိုကိုသက်၊ ကိုမျိုး၊ ချစ်ကြည်အေး၊ ခိုင်စိုးလင်း၊ ချိုပိန်းနောင်၊ စစ်ငြိမ်းဒီရေ၊ ဆူးခက်မင်း၊ ညီဇံလှ၊ နှင်းနဲ့မာယာ၊ ပန်ဒိုရာ၊ ဖိုးခွား၊ ဖိုးစိန်၊ မိုးလှိုင်ည၊ မြသွေးနီ၊ မှိုင်း (ဆေး - ၂)၊ သူရဿဝါ၊ သက်ဝေ၊ အော်ဂဲနီ၊ အောင်ဖြိုး သြမြိုင် နဲ့ အမည်မဖေါ်လိုသူ တဦး တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်…။
ဒီနေရာ မှာ Download ချပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်…။ ကိုယ်တိုင်က သရဲနဲ့ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့ အတွက် သရဲအကြောင်း မပါ ပါအောင် အတော်ကို ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ရေးထားခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး…
အခန်းတံခါးက အခါများစွာကလိုပင် အလူမီနီယံ အကွက်စိပ်စိပ် တံခါးတထပ်၊ ကျွန်းရောင်လက်နေသော သစ်သားတံခါး တထပ်ဖြင့် တင်းတင်းစေ့ကာ ပိတ်ထားဆဲ…။ အယောင်ယောင် အမှားမှားဖြင့် တံခါးကို ခေါက်လိုက်မိသည်။ သို့သော် မည်သည့်အသံ တစုံတရာမျှ မထွက်လာချေ။ အကျင့်ပါနေသော လက်တို့က စလွယ်သိုင်းလွယ်နေကျ ပိုက်ဆံအိပ် အဖြူရောင်လေး၏ အရှေ့ဖက်ခြမ်းမှာ ထည့်ထားလေ့ရှိသော အိမ်သော့ကို လိုက်စမ်းကာ ရှာနေမိသည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်ပေါ်မှာ မည်သည့် ပိုက်ဆံအိပ် တစုံတရာမျှ ရှိမနေ။ ထိုအခါမှ သူမကိုယ်သူမ သတိတရ ငုံ့ကြည့်မိခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ သူမကိုယ်ပေါ်မှာ အဖြူညစ်ညစ် (သို့) မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သော ဇာနားတပ် ဂါဝန်ရှည်ရှည်ကို တွေ့ရသည်။ ခြေထောက်မှာတော့ မည်သည့်ဖိနပ် တစုံတရာမျှ မရှိ။ ထူးဆန်းသည်နော်…။ ပိုက်ဆံအိပ်များ၊ ဖိနပ်များကို အလွန်အမင်း နှစ်သက်တတ်သူ သူမဆီမှာ မည်သည့် ပိုက်ဆံအိပ် မည်သည့်ဖိနပ် တစုံတရာမျှ ရှိမနေပါလား…
ထိုစဉ်အချိန်မှာပင် တံခါးနှစ်ထပ်ကို လွန်မြောက်ကာ တဖက်ခြမ်းကို သိမ်မွေ့ညင်သာစွာဖြင့် သူမ ရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်သည်။ အိမ်ထဲကို ရောက်သွားသောအခါ အရာရာသည် မပြောင်းမလဲ… သူ့နေရာနှင့်သူ စနစ်တကျ စီစီရီရီ ရှိနေသည်ကို အံ့သြဖွယ် တွေ့ရသည်။ ဧည့်ခန်းထဲမှ အနက်ရောင် မှန်စားပွဲငယ်ကလေးကို သူမ လက်ဖြင့် အသာအယာ တို့ထိကြည့်လိုက်သည်။ ခါတိုင်း သူမ တရက်တခါ သုတ်သင်နေကျ ဖုနမှုန့်နုနုလေးတွေ တစက်ကလေးမျှ ရှိမနေ…။ တီဗီဖန်သားပြင်… ထို့နောက် အရောင်ထွက်နေသော လယ်သာဆိုဖာ နက်နက်မှောင်မှောင်တွေ… ထူးဆန်းလိုက်တာ… သူမ နေ့စဉ် ရှင်းလင်း သုတ်သင်နေကျ နေရာများမှာ ဖုန်ဆို၍ တစက်ကလေးမျှ ရှိမနေပါလား…။ ဧည့်ခန်းပတ်ပတ်လည်ကို မျက်စိကစားလိုက်ရာ သူမ နေ့စဉ် ထိတွေ့နေကျ ကြည်လင် စိုလက်နေသော ကွန်ပျူတာ မော်နီတာ မှန်သားပြင်၊ ရွှေငါးကလေးများ လူးလာခေါက်တုန့် ပြေးလွှားနေသော အလှမွေး ငါးကန်မှ အမှုန်အမှိုက်ကင်းစင်ကာ တည်ငြိမ်ပြာလဲ့နေသော ရေပြင်ညီ၊ လောလောလတ်လတ် ရေဖျန်းထားပုံရသော ရေစက် ရေမှုန်လေးများ ခိုတွယ်နေဆဲ အိမ်တွင်း အလှစိုက်သစ်ပင်များမှ သစ်ရွက်စိမ်းလဲ့လဲ့တွေ… အိုး… မယုံနိုင်စရာ…။
ထိုအချိန်မှာပဲ သူမ တစုံတခုကို တွေးမိသွားတာဖြစ်သည်။
ကိုကို… အသံတိုးတိုးလေးဖြင့် သူမ ရေရွတ်လိုက်မိသည်…။ တုန့်ပြန်သံ တစုံတရာ ထွက်ပေါ်မလာ…။ ကိုကိုဟာ သည်လိုလူစားတော့ မဟုတ်တန်ရာဟု သူမ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တွေးမိသော အခိုက်အတံ့လေးမှာ အသက်ကို တဝကြီး ရှုသွင်းလိုက်မိသည်။ ထို့နောက် ခြေလှမ်း ခပ်စိတ်စိတ်တို့ဖြင့် မီးဖိုခန်းထဲ ဝင်သွားလိုက်သည်။ သည်အချိန်ဆို ကိုကို ရုံးက ပြန်ရောက်လို့ ရိုက်စ်ကွတ်ကာဖြင့် နှစ်ယောက်စာ ထမင်းချက်နေပြီ ထင်၏။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော်တပန်းကန်၊ ကြက်သား (သို့) ငါးအသားလွှာများကို သံလွင်ဆီအနည်းငယ် ကြက်သွန်ဖြူ ငြုတ်ကောင်းများများဖြင့် မီးပူပူမှာ ဟိုဖက် သည်ဖက်လှန်ကာ ကင်သလို ကြော်သလို လုပ်ထားသော ဟင်းတပန်းကန်ကို ထမင်းစားပွဲပေါ် အချိန်မီရောက်စေဖို့ စီစဉ် ချက်ပြုတ်နေပြီ ထင်၏။ ပြီးလျှင်တော့ အဆင်သင့် သုံးဆောင်ပါ ခင်ဗျာ… ဟူသော ရယ်သံတဝက်ဖြင့် သူမကို ထမင်းစား ခေါ်တော့မည် ထင်၏။
ထိုအတွေးတို့ဖြင့် သူမ ရဲတင်းသွားခဲ့တာ…။
မီးဖိုခန်းအဝမှနေ၍ ကိုကို ဟု ခပ်ကျယ်ကျယ်လေး အော်ခေါ်လိုက်မိသည်။ သို့သော် မီးဖိုခန်းမှာလည်း ဘယ်သူမှ ရှိမနေ။ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကလည်း သူ့နေရာနှင့်သူ နေသားတကျ၊ သန့်ရှင်းကာ ပြောင်လက် တောက်ပစွာ…။ မနက်စောစော ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်သည့် ဖန်ပန်းကန်ငယ်ကလေးသည်ပင် ဆွမ်းတော်စွန့်ပြီး ဆေးကြောကာ မှောက်ထားဟန်မှာ သူမလက်ရာအတိုင်း ချွတ်စွတ်။ ကိုကိုကြော်နေကျ ကြက်ဥကြော်သည့် ဒယ်အိုးငယ်ကလေးမှာလည်း ကြော်ပြီးလျှင် အသည်းပုံထွက်သော ပုံစံခွက်ကလေးနှင့် အတူ တွဲလျက်သား…။ ကိုကို… ကိုကို… ကိုကို ဘယ်မှာလဲ…။ သူမ မရှိသည့်နောက်မှာ သူမ၏ ခြေရာ လက်ရာများအတိုင်း အိမ်ကို သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ကာ တောက်ပနေအောင် ကိုကို့ကို ဘယ်သူကများ လာကူညီနေသလဲကွယ်…။ အတွေးနှင့်အတူ သူမ ခြေထောက်များ ယိုင်နဲ့လာတာ…
သို့သော် ကိုကိုသုံးနေကျ ရေချိုးဆပ်ပြာနံ့နှင့်အတူ ဆေးနံ့ပါသော ခေါင်းလျှော်ရည်နံ့ကို ရလိုက်သော အချိန်လေးမှာ သူမ ခြေလှမ်းများ တည့်မတ် သေချာသွားခဲ့ပြန်သည်။ ကိုကို ရေချိုးနေတာလားဟင်… ရေကျသံများ ကြားယောင်လာသလိုလို… သေချာတယ်… ဒါ ကိုကို ရေချိုးနေတာပဲ…။ အိပ်ခန်းနှင့် တွဲလျက် ရေချိုးခန်းကို သူမ၏ အမိန့်အတိုင်း ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ထားကာ အပြင်ရေချိုးခန်းမှာပင် ရေချိုး ခေါင်းလျှော် ကိုယ်လက် သုတ်သင်ရသည့် အခါတိုင်း ရေတောင် ကိုယ်ချိုးချင်တဲ့ဆီမှာ မချိုးရပါလားကွာ ဟု ငြူစူခြင်းကင်းသော ငြီးတွားမှုမျိုးဖြင့် ကိုကို ပြောလေ့ရှိသည်ကို သတိရသွားသောအခါ သူမ အသံထွက် ရယ်မောမိပါသည်။ သို့သော် ရယ်သံအက်အက်ကွဲကွဲက အပြင်ကိုရောက်မလာ… လည်ချောင်းဝမှာပင် ရပ်တန့်သွားသည် ထင်၏။
စေ့ပိတ်ထားသော ရေချိုးခန်းတံခါးကို သူမ အသာဖွဖွ ခေါက်မိသည်။ သို့သော် ဘာသံမှထွက်မလာ… ပိုမိုသေချာစေရန် သူမ ပါးစပ်ကလည်း အသံပြုကာ တံခါးကို ထပ်ခေါက်မိသည်။ သို့သော် သူမနားထဲမှာ ဘာသံမျှ မကြားရ။ စိတ်မရှည်နိုင်တော့သည့်အဆုံး ရေချိုးခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်သည်။ ဟင်… သူမ တွန်းဖွင့်သော်လည်း မပွင့်လာ… သို့သော် သူမကတော့ဖြင့် ရေချိုးခန်းထဲကို ရောက်နေပေပြီ။ သွားတိုက်ဆေး၊ သွားပွတ်တံ၊ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်သော ပစ္စည်းကိရိယာစုံ၊ ရေချိုးဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည် အစစ အရာရာသည် သူ့နေရာနှင့်သူ အံဝင်ခွင်ကျ။ ဘယ်အရာမှ ဖရိုဖရဲဖြစ်မနေ…။
တအိမ်လုံး ဘယ်နားမှာမှ ကိုကိုရှိမနေ။ နောက်ဆုံးမတော့ ကိုကိုရှိနိုင်မည့်နေရာ တနေရာသာ ကျန်တော့သည်…။ ထိုနေရာကတော့ သူမတို့၏ အိပ်ခန်းသာ…
ကိုယ်ကို အသာဖေါ့ ခြေဖျားထောက် လျှောက်လှမ်းရင်း အိပ်ခန်းဆီသို့ ဦးတည်မိသည်။ ဤခြေလှမ်းမျိုးဖြင့် လှမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း သူမကို အနောက်ဖက်မှနေ၍ ဟိတ် ငတက်ပြားကလေး… ဟု ချစ်စနိုး ကျီစယ် နောက်ပြောင်ပြီး လာရောက် ဖက်တွယ် နမ်းရှိုက်တတ်သော ကိုကို့ကို အလွန်တရာ လွမ်းဆွတ်သွားပါသည်။ ယခုလည်း အခါများစွာကလိုပင် အနောက်ကနေ ကိုကို ရောက်လာမလား ဟု သူမ တိတ်တခိုး မျှော်နေမိပါသေးသည်။ သို့သော် ကိုကို ရောက်မလာပါ…။ သည်အချိန်မှာ ကိုကို အိမ်မှာ ရှိကို ရှိနေရမည်… သူမ သေချာသိနေပါသည်။ ညနေစောင်း အချိန်မတော်ကြီး ကိုကို အိပ်များနေသလား… သူမ ပြန်အလာကို စောင့်ရင်း ကိုကို အိပ်ပျော်နေလေပြီလား…။
အတွေးနှင့်အတူ အိပ်ခန်းဝကို အရောက်မှာ အိပ်ခန်းတံခါး ပိတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘုရား… ဘုရား… သူမ အသက်ရှုမှားကာ ရင်တွေ အဆမတန် ခုန်လာခဲ့သည်။ ကိုကို... ဘာဖြစ်လို့ အခန်းတံခါးကို ပိတ်ထားတာပါလိမ့်…။ အရင်ကဆို နှစ်ယောက်တည်းနေသော အိမ်ခန်းလေးပင် ဖြစ်လင့်ကစား သူမက အခန်းတံခါးကို မပိတ်တောင် စေ့ရုံ စေ့ထားမှ နှစ်သက်တတ်သူ… ကိုကိုက ဒါမှ လေဝင်လေထွက် ကောင်းတော့မပေါ့… ဟု ဆိုကာ အခန်းတံခါးကို တဆုံး ဖွင့်ထားတတ်သူ…။ အခုမူ အခန်းတံခါးက ပိတ်လျက်သား… ထူးဆန်းလိုက်တာ…
မောပန်းလှစွာသော မရေမရာ သံသယ အတွေးတချို့နှင့်အတူ သူမ ခြေလှမ်းတွေ ယိမ်းယိုင်ကာ လူက ကတုန်ကယင် ဖြစ်လာလေသည်။ သူမဝတ်ထားသော ဂါဝန်လက်ဖျားမှ နှင်းဆီပွင့်ပုံ ပန်းဇာ ဖြူဖြူလေးကို အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်ကြည့်နေရင်း အိပ်ခန်းဝတွင် သူမ ခြေစုံရပ်လျက်သား…။ ထိုစဉ် အကြည့်တချက်က ပြူတင်းပေါက်နှင့် ကပ်လျက်မှ ဘုရားစင်ပေါ်ရှိ သပြေပန်းအိုးကလေးဆီသို့ မထင်မှတ်ပဲ ရောက်သွားခဲ့သည်။
ကြည့်ပါအုံး… စိမ်းစိုလက်နေသော အရွက်နုလေးများဖြင့် ဝေဆာ တင့်တယ်နေသော သပြေပင်ကလေးတွေ… သူမ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့စဉ်က အရွက်နုကလေးများက ထွက်လု ထွက်ခင်… သို့သော် သူမ မရှိသော ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အရွက်နုလေးတွေ တော်တော်ကြီးလာပါပေါ့လား…။ ကုန်လွန်ခဲ့သော ရက်တွေကို လက်ချိုးကာ ရေတွက်ကြည့်ချင်သော်လည်း သူမ ရေရေရာရာ မမှတ်မိတော့ချေ။
သူမ အကြည့်တို့ကို ဘုရားစင်မှ လွှဲဖယ်ကာ အိပ်ခန်းတံခါးဆီသို့ ပြန်လည် ဆွဲခေါ်လိုက်သည်။ တံခါးကို အသံမြည်အောင် ခေါက်လိုက်ရမည်လား… အဘယ်သို့ အသံပြုရပေမည်နည်း… သူမ ဝေခွဲမရ…။ အခန်းထဲမှာ ကိုကိုတယောက်တည်းရော ဟုတ်ပါ့မလား။ တခြားသူစိမ်းတယောက်ရော ရှိမနေနိုင်ဘူးလား…။ ထိုအတွေးတို့ နောက်မှာ ခြေထောက်များကို ကောင်းကောင်းထောက်၍ မရချင်တော့… ထို့ကြောင့် အခန်းတံခါးကို ကျောမှီကာ သူမ ထိုင်ချလိုက်ရသည်။
ကိုကိုရေ… ဟူသော ရေရွတ်သံ နောက်တကြိမ်မှာ ရှိုက်ငင်သံတွေအတူကပ်လျက် ပါလာခဲ့သည်။ အို… ကိုကိုများ ကြားသွားလေမည်လား…။ ထိုအသံတွေကို ကိုကိုကြားသွားလျှင် အနှောက်အယှက်များ ဖြစ်သွားလေမည်လား…။ တွေးနေရင်းမှာပင် သူမ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေမိကြောင်း သတိပြုမိသည်။ အင်း… အင်း… ကိုကိုက ငိုတာ မကြိုက်ဖူး… ချက်ချင်းပင် သူမ အငိုတိတ်လိုက်သည်။ ကြည်လင်သော စိတ်ထားလေးနှင့် မျက်နှာလေး ပြန်ရအောင် မိနစ်အနည်းငယ် အချိန်ယူလိုက်ရသည်။ ငိုထားသော မျက်နှာနီနီကို ကိုကို တွေ့မသွားစေချင်ပါ။ သို့သော် မျက်နှာကို ကြည့်ကောင်းအောင် ပြုပြင်စရာ ပေါင်ဒါဘူးလေး နှုတ်ခမ်းနီလေးမျှပင် သူမမှာ မပါလာခဲ့…။
ကဲပါလေ… ကိုကိုမေးတော့လည်း ပြောပြလိုက်ရုံပေါ့… ကိုကို့အနားမှာ တခြားမိန်းမ တယောက်ယောက်များ ရောက်နေမလားလို့ တွေးပူရင်း ငိုရသည်ပေါ့… သည်လိုဆိုလျှင်တော့ ကိုကိုက ပူစရာမရှိ ရှာကြံပြီး ပူနေသော အရူးမလေး ဟု ချီးကျူး ထောပနာ ပြုမည်မှာ အသေအချာ။
အခန်းတံခါး လက်ကိုင်ဘုကို အသာလှည့်လိုက်စဉ် အခိုက်အတံ့လေးမှာ ခုနက တည်ငြိမ်သွားသော စိုးရိမ်စိတ်များက တဖန် ပြန်လည်ကြီးစိုး နေရာယူလာကြပြန်သည်။ ဘာပဲ တွေ့တွေ့ ရင်ဆိုင်ရမှာနော်… ပြီးတော့ ကိုယ့်နေရာကို အစားထိုးရက်သူရယ်လို့ မစွတ်စွဲပဲ ကြည်ဖြူပေးရမှာနော်… ကိုကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့က ကိုယ့်အတ္တထက် ပိုအရေးကြီးတယ်နော်… ကိုယ့်ကိုယ်ကို တဖွဖွ ဆိုဆုံးမရင်း ဘာမဆို ရင်ဆိုင်မည် ဟူသော ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာချကာ တံခါး လက်ကိုင်ဘုကို လှည့်ဖွင့်လိုက်သည်။ အို… တံခါးက ပေါ့ပေါ့လေးပဲ…
ဂါဝန်စကလေး လွင့်ကနဲ တချက်အဝှေ့မှာ သူမ အခန်းထဲကို ရောက်သွားသည်…။ အခန်းထဲမှာ မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းက သူမရင်ထဲကို စူးစူးရှရှ ဝင်ရောက်ကာ မူးဝေနောက်ကျိလျှက် နေရာမှာ ပုံလျက်သား လဲကျသွားခဲ့သည်။ သို့သော် သူမ၏ ဝိညာဉ်ကတော့ ရုပ်ရှင် အနှေးပြကွက်များထဲကလို လှလှပပ နိုးထကာ ဂါဝန်စလေး တလွင့်လွင့်ဖြင့် ကိုကိုရှိရာဆီကို တလှမ်းချင်း လှမ်းသွားပြီး ကိုကို့ နောက်ကျောကို ညင်သာစွာ ဖက်တွယ်လိုက်မိသည်။
ကိုကိုလား… ကိုကိုကတော့ သူမရဲ့ အထိအတွေ့ကို ဘာမှ မခံစားရသူတယောက်လို…။ အိပ်ရာဘေးမှ စာကြည့်စားပွဲတွင် ထိုင်ကာ စားပွဲပေါ်တွင် ထောင်ထားသော သူမတို့ ချစ်သူဖြစ်ကာစနေ့ရက်တွေက တယောက်နဲ့တယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင် ခပ်ခွာခွာ ရပ်ရင်း၊ တယောက်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေကို တယောက်က လှမ်းယူ ဆုတ်ကိုင်လို့၊ တယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ တယောက်က တယောက်ကို ဖွေရှာလို့၊ ကြည်ရွှင် ရယ်မောနေကြသော အနည်းငယ် ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သော မှန်ဘောင်လေးထဲမှ ဓါတ်ပုံကို မျက်တောင်မခတ် ငေးကြည့်နေခဲ့သည်လေ…။ ကိုကို့ နောက်ကျောကို ပါးဖြင့်မှီအပ်ကာ အသံမထွက်ပဲ သူမ ကြိတ်ရှိုက်ငင်နေခဲ့မိသည်။ ကိုကို့ကို အထင်လွဲချင်ချင် သံသယများဖြင့် ပူလောင်ခဲ့ရသော အချိန်များအတွက် သူမ အထပ်ထပ် တောင်းပန်ရင်း ငိုပြီးရင်း ငို… ငိုရတာကိုပဲ အရသာ တွေ့နေခဲ့သည်…။
သူမတို့ ဓါတ်ပုံကို စူးစူးစိုက်စိုက် ငေးကြည့်နေသော ကိုကို့ မျက်လုံးတွေ နီရဲနေမည်လား… ကိုကို မျက်ရည်ကျနေမည်လား… ကိုကို ပြုံးနေမည်လား… ကိုကို မဲ့နေမည်လား… စသော ကိုကို့မျက်နှာပေါ်မှ ခံစားချက်များကို သူမ ဖွေရှာကြည့်ရန် စိုးစဉ်းမျှ မလိုအပ်တော့ကြောင်းကို တချက်တချက် စည်းချက် မညီညာစွာ လှုပ်ခါသွားသော ကိုကို့ကျောပြင်မှ တဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ လည်ပင်းတလျှောက် တင်းမာလာသော သွေးပြန်ကြောများ၏ လှုပ်ရှားမှုများမှ သော်လည်းကောင်း သူမ အသေအချာ ခံစားသိရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
သူမ မရှိသော နေ့ရက်တွေအတွက် ကိုကို့ကို သူမ စိတ်ချလိုက်တော့မည်…။
ကိုကို စိတ်ချမ်းသာဖို့… ကိုကို့ ဘဝမှာ ဆက်လက် နေပျော်ဖို့ သူမ အဝေးမှသာ ဆုတောင်းပေးတော့မည်။ သံသယ စူးစူးများ၊ မယုံသင်္ကာ စိုးရိမ်စိတ်များဖြင့် ကိုကို့အပါးကို သူမ နောက်တကြိမ် ချဉ်းကပ်ရန် ကြိုးစားတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ကိုကို့ကျောပြင်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အသာအယာ ရှိုက်နမ်းအပြီးမှာ ဘာကိုမှ မချည်နှောင် မတွယ်တာနေတော့ပဲ ဝါဂွမ်းလေးတစလို တိုးတိတ်စွာ သူမ လွင့်မျောသွားခဲ့သည်…
နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ် နော်… … ကိုကို…
Posted by သက်ဝေ at 2:00 PM9comments:
Posted by သက်ဝေ at 9:10 PM 10 comments:
- အဲဒီ အမျိုးသမီးကို လူအများက မင်းသမီး ဟု ခေါ်ကြ -
မင်းသမီးဟာ ဝဲ - ယာ တဖက်တချက်မှာ တာဝန်ရှိသူတွေ - ကိုယ်ရံတော်တွေ ခြံရံပြီး ခန်းမထဲက ထွက်အလာ - မင်းသမီးဟာ ပါးလွှာသော်လည်း အရှေ့ပိုင်းတပိုင်းလုံး လည်ပင်းအထိ လုံခြုံတဲ့ အဖြူရောင် တန်ဖိုးကြီး ပိုးဂါဝန်ရှည်ကို သေးသွယ်တဲ့ ခန္ဒာကိုယ်မှာ အချိုးတကျ ဝတ်ဆင်ထား - ကျောဖက်မှာ သိုင်းထားတဲ့ ကြိုးသေးသေးလေး နှစ်ချောင်းကလွဲလို့ ခါးဆစ်ထိအောင် ဝတ်လစ်စလစ် - မင်းသမီးဟာ ချွန်မြလှပတဲ့ လေးလက်မ ဒေါက်သေးသေးလေးနဲ့ ရွှေအိုရောင် ကြိုးသိုင်းဖိနပ်ကိုစီးလို့ အနီရင့်ရင့် အမွေးပွ ကော်ဇောပေါ်ကို - တလှမ်းချင်း တလှမ်းချင်း - ကနွဲ့ကလျ လှပစွာ လျှောက်အလာ ရှည်လျားစွာ ဝဲနေတဲ့ ဂါဝန်စဟာ အနီရောင် ကော်ဇောနဲ့ တင့်တယ်စွာ မဟာမိတ်ဖြစ် - အရောင်စုံ မီးပွင့်တွေအကြား ကင်မရာမင်းတွေရဲ့ ဖျိုးဖျိုးဖြတ်ဖြတ် မီးရောင်တွေကြားမှာ လိမ်မော်နီရောင် ပြေပြေ သုတ်လိမ်းထားတဲ့ ပိပိရိရိ သေသပ်ပြီး ပုံကျ လှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးကနေ - ပန်းရင့်ရောင် ပါးပြင် - မို့ - တက်လာသည်အထိ - အပြုံးလဲ့လဲ့ကို အဆက်မပြတ် ချွေချ - တချက် တချက်မှာ ရှေ့တူရှူကို လှမ်းနေရင်းကနေ အနောက်ဖက်ကို ခေါင်းလေး စောင်းငဲ့လို့ မခို့တရို့ - လည်ပြန် ပြုံးပြ - မင်းသမီး ဖြတ်သွားတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာ အကောင်းစား နာမည်ကြီး ရေမွှေးနံ့တွေ ဝေ့ဝဲ သင်းပျံ့ - အလှပြင်ထားတဲ့ ကိုးနှစ် ဆယ်နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးတယောက်က ခရမ်းရောင် သစ်ခွတွေပါတဲ့ ပန်းစည်းခပ်ကြီးကြီးတစည်း မင်းသမီးကို လှမ်းပေးပြီး နှုတ်အဆက် မင်းသမီးရဲ့ အပြုံးတွေ ပိုပြီး လင်းလက်သွား ကင်မရာက မီးပွင့်တွေလည်း ပို လက်သွား - မင်းသမီးဟာ အနီရောင် ကော်ဇောတလျှောက် လှလှပပ ကြွကြွရွရွ လှမ်းလျှောက်အပြီးမှာ တံခါးလက်ကိုင် အသင့်ဖွင့်ပေးထားတဲ့ အနက်ရောင် ကားကြီးထဲကို ညင်သာစွာ ဝင်ထိုင် - ညာလက်ကလေး ကို အသာအယာ မြောက်ပြီး လက်ပြ နှုတ်ဆက် - စဉ်မှာ - ရာ ထောင် သောင်းမက ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတဲ့ ပရိသတ်က မင်းသမီးရဲ့ မျက်နှာတခြမ်းနဲ့ အပြုံးတစကို မြင်ရဖို့အရေး သူ့ထက်ငါ အရှေ့ကိုရောက်အောင် အလု အယက် တိုးဝှေ့ကြ - မင်းသမီးရဲ့ အမည်နာမကို ရေရွတ်ရင်း လက်တွေ ဝှေ့ယမ်းလို့ မင်းသမီးကို အားပါးတရ နှုတ် ဆက် ကြ -
မင်းသမီး စီးလာတဲ့ အနက်ရောင် ကားကြီးဟာ ခြံဝင်းကျယ်တခုထဲ ဝင်သွားအပြီး နန်းတော်တမျှ ကြီးကျယ် ခန်းနားတဲ့ အဆောက်အဦးတခုရှေ့မှာ ရပ် - ကားရပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ မင်းသမီးဟာ ကားတံခါးကို ဝုန်းကနဲ - လာဖွင့်ပေးတဲ့သူကို မစောင့် - သူ့ဟာသူ - ကြမ်းတမ်းစွာ တွန်းဖွင့်ပလိုက် - တံခါး အပွင့်မှာ ဂါဝန်ရှည်ကို လုံးထွေးပြီး မ - ကိုင်ရင်း ဆိုးဆိုးဆတ်ဆတ် ခြေလှမ်းနဲ့ အတူ ကားပေါ်က အဆင်း - ပါးစပ်ကလည်း အိမ်အကူ - လို့ ယူဆရတဲ့ - မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ နာမည်ကို ခပ်ကျယ်ကျယ် အော်ခေါ်ရင်း - လက်က ကိုင်ထားတဲ့ ပန်းစည်းကို လှေခါးရင်းတနေရာကို လွှင့်ပစ်လိုက်ရင်း - ခြေထောက်မှာ စီးထားတဲ့ ရွှေအိုရောင် ကြိုးသိုင်းဖိနပ်ကို ခပ်ရမ်းရမ်း ကန်ချွတ်လိုက်ရင်း - ဂါဝန် ဖြူလွလွကို - မညှာမတာ - လုံးထွေး ပင့်ကိုင်ရင်း လှေခါးထစ်တွေကို ခြေသံ ပြင်းပြင်း နဲ့ လှမ်းတက်အသွား စောင့်ကြိုနေကြတဲ့ အခြွေအရံတွေ အိမ်အကူတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း အမိန့်ပေး စေခိုင်းသံတွေနဲ့ အတူ ဆဲရေး တိုင်းထွာတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပစ်ပေါက် - ကြားကြားသမျှ လူအကုန်က ဦးခေါင်းကို ကြမ်းပြင်နဲ့ ထိလုနီးပါး ညွတ်ပြီး မင်းသမီးရဲ့ အမိန့်ကို နာခံကြ - မင်းသမီးရဲ့ ချောမွေ့ လှပတဲ့ မျက်နှာဟာ မျက်နှာဖုံးအတုကို ခွာချလိုက်သကဲ့သို့ - မျက်လုံးနီနီ - နှာယောင် ကောက်ကောက် - ရှည်လျား ချွန်မြ သွားစွယ်များ - သွေးစွန်းနေသော နှုတ်ခမ်းရဲရဲများဖြင့် - တမဟုတ်ချင်း အရုပ်ဆိုးကာ အ ကျည်း တန် သွား -
အဖြူရောင် လင်းလင်း အိပ်ခန်းတခု နံရံတွေ ပြူတင်းပေါက် ဘောင်တွေကလည်း အဖြူရောင် - ပန်းနုရောင် လွှမ်းတဲ့ ချည်သားစစ်စစ် အိပ်ယာဖုံး နဲ့ ပန်းနုရောင် ဇာခန်းဆီးရှည် - ကနုတ်ပန်းတွေ စီခြယ်ထားတဲ့ ပရိဘောဂအစုံ နှင်းဆီဖြူတွေ ထိုးစိုက်ထားတဲ့ ပန်းအိုးတွေက နေရာ အတော်များများမှာ နေရာယူ - ခရစ်စတယ် စီခြယ်တဲ့ မီးဆိုင်း - ဂီတသံ တိုးညင်းစွာ ပျံ့လွင့် - မင်းသမီးရဲ့ အိပ်ခန်း - မင်းသမီးဟာ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဖြေလျော့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဂါဝန်ရှည်ကို ဖြေလျော့ အိပ်ရာဘေး စားပွဲပေါ်က ဆေးလိပ်ဘူးနဲ့ မီးခြစ်ကို လှမ်းယူ ဆေးလိပ်မီးခိုးတွေကြားထဲ အချိန်အတော်ကြာ နစ်မျောအပြီးမှာ အိပ်မက်ယောင်သူတယောက်လို တစုံတခုကို အရူးအမူး လိုက်လံ ရှာဖွေ ပါးစပ်ကလည်း ဆဲရေး တိုင်းထွာသံ တစွန်းတစနဲ့အတူ မျက်စိနား လက်နား နီးစပ်သမျှ ပစ္စည်းတွေကို တခုမကျန် တွန်းထုတ် - ပစ်ပေါက် - ကန်ကျောက် - နောက်ဆုံးမှာ သူလိုချင်တာကို ရှာ ဖွေ တွေ့ ရှိ သွား - အဖြူရောင် ဆေးပြား သေးသေးလေး နှစ်ပြား - ကို - ခရစ်စတယ် ဖန်ခွက် လှလှလေးထဲက ရေနဲ့အတူ မော့ချလိုက် - ပြီးတော့ ဖန်ခွက်ကို အခန်းထောင့် တနေရာကို ပစ်ပေါက်လိုက် - ခွမ်း - ဖန်ခွက် အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ကွဲကြေသွား - ပြီးတာနဲ့ အိပ်ယာပေါ်ကို အရုပ်ကြိုးပြတ် ခွေ ခေါက် လှဲ ချ - လဲ ကျ - တိမ်တွေလား - နဂါးငွေ့လား -
မင်းသမီး ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ညနေခင်း ပွဲတက် ပိုးဂါဝန်ရှည်ဟာ ကုတင်ခြေရင်း ဆေးလိပ်ပြာခွက်ထဲက မီးမငြိမ်းသေးတဲ့ သောက်လက်စ ဆေးလိပ်တိုနဲ့ ထိ တွေ့ မိတ် ဆက် ရင်း တငွေ့ငွေ့ လှိုက်စား - တ မြည့် မြည့် နဲ့ - တ တိ တ တိ - လူ မ သိ သူ မ သိ - လောင် ကျွမ်း နေ -
Posted by သက်ဝေ at 9:30 PM 16 comments: